ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने डरले सुन्दरी घरभित्रै कैद ! - Everest Dainik - News from Nepal
ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने डरले सुन्दरी घरभित्रै कैद !
२०७४, १७ मंसिर आईतवार
सबैले खोज्ने राम्रो हो। अझ राम्री युवतीको चर्चा सबैभन्दा बढी हुन्छ। कतिपयलाई आफ्नै सुन्दरताले पनि दुःख दिन्छ। अर्थात् आफ्नै सुन्दरता अभिषाप बन्छ। धेरैलाई सुन्दा यो अचम्म लाग्न सक्छ। तर रुसकी एक युवतीलाई भने यस्तै भएको छ। २६ वर्षीया एन्जेलिका केनोभा धेरै सुन्दर भएकै कारण घरभित्रै कैद भएकी छिन् ।
एन्जेलिकाका अभिभावकले उनलाई घरबाट निस्कन दिँदैनन्, किनकी बार्बी डल जस्तै सुन्दर देखिनी आफ्नी छोरीलाई अरुले गलत नजरले हेरेको उनीहरु मन पराउँदैनन्। एन्जेलिकाले भनेकी छिन् – ‘मानिसहरु मलाई घरभित्रै कैद बनाएको सोच्छन्, तर यो निकै गलत हो किनकी मेरो बुबाआमा मेरो धेरै हेरविचार गर्नुहुन्छ।’
यद्यपी उनी कहिल्यै एक्लै घरबाट निस्कँदिनन् । आफूलाई व्वाईफ्रेन्ड बनाउने छुट पनि नभएको र बाहिरी दुनियाँ बारे धेरै अनुभव नभएको उनले बताएकी छिन् । २६ वर्षकी एन्जेलिकाको लागि आवश्यक सर सामान उनकी आमाले किनेर ल्याईदिने गर्छिन्।
कतिपयलाई उनलाई प्लाष्टिक सर्जरी गराएको आरोप समेत लगाएका छन् । तर यो आरोप झुटो भएको उनको भनाइ छ। परिवारका गतिविधिले भने उनी कैदी समान भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले खुलासा गरेका छन्।
ट्याग्स: Beautiful lady